Daily Facebook News « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » Daily Facebook News
တစ်လုံးက ဘာမှန်းမသိပေမယ့် တစ်လုံးကတော့ Pressure Cooker ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲ မှာ ဘောသီး၊ အိမ်သုံး သံမှိုနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုအား ပြင်းတဲ့ ယမ်းများကို ဖျစ်ညစ်ထည့်ထားတဲ့ အပေါ်မှာ Blasting cap တပ်ထားရုံပါပဲ။ Blasting cap ကို activate လုပ်ဖို့ သုံးလို့ရတဲ့ နည်းလမ်း ကတော့ အများကြီး ပါပဲ။ ချိန်ကိုက်နာရီ၊ ဖုန်း ခေါ်ဆိုမှု၊ ဖုန်း မတ်ဆေ့ခ်ျ နဲ့ အခြားသော ကြိုးမဲ့ ရေဒီိယိုလိုင်းဆက်သွယ်မှု နည်းလမ်းပေါင်းများစွာန…ဲ့ လွယ်လွယ် ကူကူ မီးရှို့ လို့ရတဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ပါတီဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ မနက်ဖြန် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံကို အလည်အပတ်ခရီး သွားရောက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ RNDP နဲ့ SNDP ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့က ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ မကွေး၊ မန္တလေးနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တွေကို ဖြတ်သန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ တရုတ်ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကိစ္စကို ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ RNDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီဆွေးနွေးမယ့်အထဲမှာ ပိုက်လိုင်းတလျှောက်မှာ သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ လယ်ယာမြေ လျော်ကြေးတွေပေးဖို့ကိစ္စကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောပါတယ်။
ခရီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ ပါတီတွေကတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(SNDP)၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (NUP)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ(NDF)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Like · · Share · 4427 · about an hour ago ·
Back to Album · ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့’s photos · ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့’s Page
Tag photoClick on the photo to start tagging.Finished tagging
*အမျိုးသားရေးတာဝန်ကြောင့် OIC ၀င်ရောက်ရေးကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ*
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၁၄ရက်နေ့က ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) က မြန်မာနိုင်ငံကို OIC အဖွဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကိုလည်း မြန်မာအစိုးရအပေါ်OIC ၀င်ရောက်မှုခွင့်ပြုရေး ဖိအားတွေပေးပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ …OIC အဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်အရတော့ ဒီလို OIC က မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အသည်းအသန်ဝင်ရောက်ချင်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လူနည်းစုမွတ်ဆလင်တွေ အဖိအနှိပ်ခံနေရတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ OIC ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ လုံးဝကိုက်ညီခြင်းမရှိတာကြောင့် ဒီဆောင်းပါးရေးဖြစ်လာပါတယ်။
OIC အဖွဲ့ဟာ ၁၉၆၉ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပြီး မွတ်ဆလင်တွေအရေးကိစ္စတွေအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ OIC အဖွဲ့ရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းကတော့ Sharia law ပါ။ ဒီအဖွဲ့မှာ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် စည်းမျဉ်းသက်သက်ရှိပါတယ်။ သူ့စည်းမျဉ်းကတော့ “all the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari’ah" "the Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration” ဆိုပြီးတော့ပါ။ OIC အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ Sharia law အပေါ်အခြေခံတဲ့ လူ့အခွင့်ရေးစည်းမျဉ်းကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံလာအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုများကြောင့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်မလာပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက အဲဒီ OIC အဖွဲ့ရဲ့ လူ့အခွင့်ရေးစည်းမျဉ်းကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ အလယ်အလတ်သဘောထားရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေပါ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းကို အပြီးအပိုင်လက်ခံထားခြင်းမရှိဘဲ Sharia law နဲ့ငြိစွန်းတဲ့ လူ့အခွင့်ရေးကိစ္စတွေဆိုရင် သူတို့ကိုယ်ပိုင် Sharia Law ပေါ်မူတည်တဲ့လူ့အခွင့်ရေးစာတမ်းကိုပဲ လက်ခံကြပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၅၇နိုင်ငံရှိပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား အစချီလို့ ယီမင်၊ အဇာဘိုင်ဂျန် အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထိ ပါဝင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အာရှနဲ့ အာဖရိကက မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ ရေနံထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံများကအဓိက ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလွန်ခိုင်မာသော ငွေကြေးအင်အားရှိပါတယ်။
ဒီလိုမွတ်ဆလင်အများစုနိုင်ငံတွေသာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ OIC ဟာ ဘာ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အသည်းအသန်ဝင်ရောက်ချင်နေတာလဲ။ သူတို့အဆိုအရတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက မွတ်ဆလင်တွေအဖိနှိပ်ခံနေရတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်ဦးရေ ၂.၄သန်းခန့်ရှိတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့်မနည်းလှဘူး။ OIC ရဲ့အဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ ပေတံဟာ ဘာကိုတိုင်းတာပြီးပြောတာပါလဲ။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်တွေ ၀တ်ပြုစရာနေရာမရှိဖြစ်နေသလား။ ဒါမှမဟုတ် ၀တ်ပြုရတာ ကျပ်တည်းနေသလား။ လူဦးရေနဲ့ ဗလီအချိုးအစား အရမ်းကို မလောက်မငှဖြစ်နေသလား။ မွတ်ဆလင်တွေဝတ်ပြုတာကို အနှောက်အယှက်ပေးမှုတွေရှိနေသလား။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်မရဖြစ်နေပါသလား။ ဒီအတွက် အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ အစိုးရအကြီးအကဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ထဲမှာတောင် မွတ်ဆလင်ရှိပါတယ်။
၅။ မွတ်ဆလင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ တန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်မရဘူးလား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို ဖိနှိပ်ပြီး ပညာသင်ကြားခွင့်မပေးတဲ့ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်ရှိနေသလား။
ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်သမျှပေတံတွေနဲ့တော့ မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်နေရာမှာ အဖိနှိပ်အရမ်းခံနေရလို့ OIC က မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ချင်တာလဲဆိုတာကို အဖြေရှာမရပါ။ အချို့ကတော့ပြောတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လျှောက်ရင် အရမ်းခက်တယ်၊ အဲဒါ မွတ်ဆလင်မို့လို့ မဟုတ်ဘူးလားတဲ့။ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အဖေဘက်ကနေ တရုတ်သွေးစပ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လုပ်တဲ့အခါမှာ သွေးနှောဖြစ်နေတဲ့အတွက် အစကနေအဆုံး အားလုံးကို ခက်ခက်ခဲခဲလိုက်လုပ်ရပါတယ်။ ဒီလိုခက်တာက ဘာသာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးနှောဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
ဒီလိုအကြမ်းဖျင်းဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ကိုပဲ OIC ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်ချင်တာဟာ ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့မွတ်ဆလင်တွေကို အကူအညီပေးဖို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက် လုံးဝမခိုင်မာကြောင်းသိသာပါတယ်။ OIC ဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့သာ အဓိကလို့ ဦးတည်ချက်ထားပုံရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်အကြောင်းရင်းမျိုးစုံရှာရင်း ချဉ်းကပ်နေတာ တောင်းဆိုနေတာဟာ ရယ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာ သာသနာအတွက်လည်း စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။
OIC ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ လုံးဝပေးဝင်စရာမရှိပါဘူး။ ပထမအချက်ကတော့ သူတို့ပြောနေသလို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေ အဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်ဆိုတာ လုံးဝမမှန်တဲ့အတွက်ပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ OIC ဟာ အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့အစည်းပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုသာ ကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါ။ ဒီအတွက် မွတ်ဆလင်အများစုမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါ။ နောက်တစ်ခါ OIC သာဝင်ရောက်လာခဲ့ရင် အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲ ခွဲခြားထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာ အသိသာကြီးပါ။ ဒီအတွက် OIC ၀င်ရောက်ဖို့ကိစ္စကို မွတ်ဆလင်တွေသဘောကျတယ် ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ဒီလိုသွေးခွဲရာကျတဲ့ ခွဲခြားထောက်ပံ့ခြင်းကို ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေသဘောမကျတာကလည်း ဖြစ်သင့်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရယ်စရာကောင်းတာတစ်ခုက OIC ရဲ့ ဘာသာ လူမျိုး ခွဲခြားထောက်ပံ့ခြင်းကို Racist လို့ မစွပ်စွဲကြဘဲ ဒီ OIC အဖွဲ့ကို ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေကိုတော့ Racist, Extremist လို့ ၀ိုင်းစွပ်စွဲနေကြတာကိုပါ။
တကယ်တော့ မွတ်ဆလင်တွေဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ OIC ဟာ ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်နိုင်တာလား ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား။ တစ်ခုခုတော့ သေချာပါတယ်။ OIC အဓိပတိ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အလွန်အမင်းဖိနှိပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေကိုလည်း ကန့်သတ်ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလိုဖိနှိပ်မှုတွေ မရှိဘူးဆိုတာ ရိုးရိုးသားသားကြည့်ရင်တွေ့မှာပါ။ ဒီလို ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာတောင် လူ့အခွင့်ရေးကိုမလေးစားတဲ့ မလိုက်နာတဲ့ နိုင်ငံတွေက လူ့အခွင့်အရေးကိုအကြောင်းပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်ချင်ပါတယ်ဆိုတာက အံသြဖို့လည်းကောင်း ရယ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာအရေးအတွက် လုပ်နေကြတဲ့ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပြီးသားပါ။ ဒီအတွက်နောက်ထပ် ပြည်ပက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထပ်ပြီး မလိုအပ်ပါဘူး။
အခုချိန်ထိတော့ OIC ရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကတောင့်ခံထားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကလည်း လူထုကိုယ်တိုင်ကိုက OIC ကိုအလိုမရှိကြောင်း ဆန့်ကျင်ထားလို့ပါ။ OIC ရဲ့ ရှေ့လျှောက်ဖိအားပေးမှုတွေကို ဘယ်လောက်တောင့်ခံထားနိုင်ဦးမလဲဆိုတာကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။ OIC ကို ၀င်ရောက်ခွင့်မပြုခြင်းဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးလို့လည်း မဟုတ်၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ မွေးရာပါအခွင့်အရေးပါ။ ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်း ဖိအားပေးမတောင်းဆိုနိုင်ဘူး၊ ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်း အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူး။ ဒီအမျိုးဘာသာအခွင့်အရေးဟာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ရှိနေ ကျင့်သုံးနေတဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစံပြဆိုတဲ့ အမေရိကလိုနိုင်ငံမှာတောင် ခိုးဝင်လာတဲ့ မက္ကဆီကန်တွေကို လူ့အခွင့်အရေးကြောင့် ၀င်စေဆိုပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တာမရှိပါဘူး။ ဒါဟာ အမျိုးသားရေးတာဝန်ပါ။ အဲဒီတာဝန်ကို ဘယ်ပေတံနဲ့မှတိုင်းတာပြီး ကျွန်တော်တို့အလျှော့မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာသာသနာ ကာကွယ်ဖို့အတွက် OIC ကို လုံးဝအ၀င်မခံနိုင်ပါဘူး။
New MyanmarFoundation, Kyaw Gyi, Ahh Maung and 1,142 others like this.
Kingsout Thu OIC ကို ၀င်ရောက်ခွင့်မပြုခြင်းဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးလို့လည်း မဟုတ်၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ မွေးရာပါအခွင့်အရေးပါ။
Yesterday at 14:00 · Like · 11
Ni Hlaing အဲ့ သလိုအကိုးအကားမျိုးကို ကမ္ဘာကသိဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါသည်
Yesterday at 14:02 via mobile · Like · 8
Ni Hlaing ကျေးဇူးပြု၍ တတ်သိနားလည်သည့်သူများ ကမ္ဘာကသိအောင်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါ
Yesterday at 14:04 via mobile · Like · 6
Thitar Sann oic .org is the organization of sons ofabitch,grandchildren of pigs and also they are universal evils to other religions.
Yesterday at 14:11 · Like · 2
Aung Sithu လုံးဝလက်မခံနဲ့ ဘယ်ကောင်မှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး
Yesterday at 14:29 · Like · 5
Tin Mg Win သိပ်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး ဒါကို oic သိအောင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပြီး ဖြန့်ဝေပါမေးခွန်းများကိုဖြေပါစေ။ ၀ic က်ိုမြန်မာပြည်အတွင်း ခြေတစ်ဖ၀ါးချဖို့တောင်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။
Yesterday at 14:32 · Like · 10
Soe Htaik Aung လုံးဝ ထောက်ခံပါတယ်
Yesterday at 14:41 via mobile · Like · 4
Newhoe San မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာ အာဏာ ကို မည့်သည့် မိစ္ဆာဒိဌိ မွတ်ကုလား မှ ဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ခွင့်မရှိ
Yesterday at 14:42 via mobile · Like · 6
Min Htet လုံးဝခွင့်မပြုပါနဲ့ ဆန့ကြင်ကြမယ် ရွှေတို့ရေ
Yesterday at 14:51 via mobile · Like · 3
Love Pwint fuck off oic ရေ
Aungnay Tun ဘာသာရေးဘက်ကကြည့်ကြည့်လူမျိုးရေးဘက်ကကြည့်ကြည့် oic ဟာမြန်မာပြည်ကိုကောင်းသောလာခြင်းမဟုတ်ပါ ပျင်းပျင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပေးကြပါ
Yesterday at 15:11 via mobile · Like · 3
Lin Aye Naing ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး
—သန်းရွှေရဲ့ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေး ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေက စစ်တပ်ကိုဗမာစစ်တပ်လို့ပြောကြတာထောက်ရင်ပေါ့…See More
Yesterday at 15:25 via mobile · Like
Thae Moe ခြေချဖို့တောင်စိတ်မကူးနဲ့ ခြေကြူးခြေဖြတ် လတ်ကြူးလတ်ဖြတ်မယ်
Yesterday at 15:37 · Like · 1
Nyi Htut ခွေးသား ဝက်မြေး တွေကိုလုံးဝ ခွင့်မပြုသင့်ဘူး ဆန့်ကျင်ကြမယ်ဟေ့
Yesterday at 15:47 via mobile · Like · 1
Sai Thu Fuck OIC
Thiha Zaw ဆောင်းပါးက အင်မတန်ကောင်းပါတယ် ဒီလို ဆောင်းပါးမျိုး စကားမျိုးတွေကို ကမ္ဘာက သိစေရန်ချပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါလို့ ပညာရှင်တွေ developer တွေကို ဒီနေရာကနေ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်
Yesterday at 15:54 via mobile · Like · 2
Aungko Myo မေးချင်တယ် မွတိတွေကို ဒို့နိုင်ငံမှာနေ၇င် ဒို့ ဥပဒေကို လေးစားပါ
Yesterday at 15:57 via mobile · Like
Aye Than oicလုံးဝလုံးဝအလိုမရှိ
Yesterday at 16:15 via mobile · Like · 1
Venocandy Candy OIC Ko lee bae lo Pyaw chin tal . 786 arr lone Ko lae lee bae.
Yesterday at 16:18 · Like
Kolat Moto ♥ဒီလိုဆောင်းပါးရှင် မျိုး၊နိုင် ငံရေးသမား
IOC ဟာအ ကောင်းလာ
ချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မွတ်ဆလင် ဘာသာ…See More
Tin Maungmyint သူတို့ကိုခြေချခွင့်ပေးရင် တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမူ့ရမှာမဟုတ်ဘူး
သူတို့အချင်းချင်း အပြန်အလှန်သတ်နေတာတခြားတိုင်းပြည်ဆိုပြောမ နေနဲ့
Yesterday at 16:24 via mobile · Like · 1
Thura Myomyint IOC မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရင်ဘာသာသာသနာကွယ်ပျောက်မယ်
Yesterday at 16:44 via mobile · Like · 1
Zin Po right!!
Yesterday at 16:55 via mobile · Like
Aung Aung Aung IOC လုံးဝအလိုမရှိ
Yesterday at 16:58 via mobile · Like
Uaungthukhaing Aungthukhaing I never ever accept OIC.
Ngwe La IOC လုံးဝအလိုမရှိ
Tuntun Linzoo မြန်မာနိင် ငံ က ဗုဒ္ဓဘာသာ နိင် ငံ ပါ No Oic
Yesterday at 17:19 · Like
Aung Myo Khine No OIC ever…. Please do not pressure on our Government to allow OIC to our country… Or UN will out of our land….
Yesterday at 17:21 via mobile · Like
Win Win Very very important for our country, for our religion and for our nationality. No need OIC in our country.
Aung Moe San တစ်စက်လေးတောင်ခြေချခွင့်မပြုပါနဲ့
Yesterday at 17:45 via mobile · Like
Bawga Theiddhi No oic
Pauk Sa မင်းတို့စည်းမျဉ်စည်းကမ်းအတိုင်းလိုချင်ရအောင် မင်းတို့နိုင်ငံ မဟုတ်ဘူး မင်းတို့လိုချင်တဲ့စည်းမျဥိးစည်းကမ်းအတိုင်နေချင်ရင် မင်းတို့တိုင်းပြည်ပြန်ပါလား ငါတို့နိုင်ငံမှမင်းတိုမရှိရင်မျက်စိနှောက်လည်းသက်သာတယ် ငါတို့အတွက်ပိုလုံခြုံတယ် မင်းတို့ရှိနေရင်ငါတို့အတ…See More
Kyawyenaing Yenaing သနားလို့Oicရေ မင်းတို့ ရဲ့ မျိုးဆက်တွေ ငတ်ပျက်ပြီးသေသွားမှာကို မကြည့်ရက်တဲ့ ငါတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေက ထ္မင်းကျွေးပြီးလုပ်စားကိုင်းစားနိုင်အောင် မြေလေးတွေကို စွန်ကျဲ ခဲ့တဲ့ မေတ္တာလေကိုမှာ မထောက်ပဲုမန်မာပြည်ကြီးကို မင်းတို့ပြည်ဆိုပြီး ကမ္ဘာ့မှာ မေ…See More
Jo Jo me 2. well come to myanmar we fight oic
Than Swewin IOC ခွေတွေလို အူချင်လို့ဒို့နိုင်ငံလာမှာလား
ဒီမှာမင်းတိုမျိုးတွေအူတာတောင်နားညီးလို့ ကြားလားခွေးတွေ လုံးဝအလာမခံဘူး လာရင်ဝိုင်းဆော်မယ် ၀က်မြည်ုခွေးသားတေနိုင်ငံအကြီးအကဲတေ့လဲလက်မခံသင့်ဘူး မင်းတို့လဲ ၀က်မြည်းခွေးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။
Thuya Win OICကိုလုံးဝပေးမဝင်နိုင်ပါ။။ငါ့နိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်OICနဲ့လုံးဝမပက်သက်ပါ။။ငါတို့မြေမှာနေငါတို့ရေကိုသောက်ပြီးငါတို့ကိုပြန်စော်ကားနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခွေးမျိုခွေးနွယ်ဝင်တွေကိုကျွေးချင်သပမွေးချွင်သပ၊ကူညီစောင့်ရှောက်ချင်သပဆိုရင်မင်းတို့နိုင်ငံထဲကိုခေါ်သွားပြီးကူညီလိုက်၊။နောက်တောမှ့မင်းတို့သိလာမယ်၊၊
Snow Snow NO OIC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dhamma Gosaka OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းမှာတောင် မိမိတို့လက်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရပဲ အခြားနိုင်ငံများမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုခြင်းသည် နယ်ချဲ့မှုလုပ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်မှာ OIC ကိုလက်ခံစရာအကြောင်း မရှိ။
Sar Mwe ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တိုင်းလက်တွဲညီညီတိုက်ဖျက်ကြစို့
Nila Khaing I strongly agree your post, No OIC.
Kyithu Zin No No OIC
Konge Nge သူတို့ရဲ ဗလီတစ်ခုဆောက်ပြီးရင်တောင်
ဘဃ်လိုမှ ဖယ်ရှားလို့မရတာ သူတို့ရဲ့အဖေ
OIC ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်နိင်ငံကနေ တစ်သက်လုံး မောင်းထုတ်လို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး
Winhanhtwe Htweိdon’t come OIC
Zinmin Thant မင်းအောင်လှိုင်နေရာလဲမလားကုလသမဂ္ဂစစ်ခုံရုံးလည်းမကြောက်ဘူးအမျိုးသာသာသနာအတွတ်ဆိုရင်
Ayeaye Myaing OIC အလို မရှိ မြန်မာ နိုင် ငံ ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက် ဖို့ အေးချမ်း ဖို့ OIC ကိုအလို မရှိပါ
Ko Kyaw Aung right
Min Thu Win နောက်ထပ်မလာပါနဲ လာမညာနဲ့ လက်မခံဘူး
Swe Oo နယ်စပ်ကခိုးဝင်ပီးဆွေမျိုးစပ်တဲ့မွတ်တွေကိုတော့သေချာပေါက်နှင်ထုတ်သင့်ပါတယ်
Min Tun Very good အပြည့်အဝထောင့်ခံတယ်။ မေးကြည့်လိုက်ပါမွတ်တွေကို တစ်မိသားစုကို ဗလီ တစ်လုံး ဖြိုပေး မလားလို့။ လုပ်ပေးရင် OIC ကိုပေးဝင်ဖို့စဉ်းစားပေးမယ်လို့။
← Burma မြန်မာပြည်သား	Facebook Knowledge Sharing →